Baro daawada ee Ukraine - Xarunta Admission Yukreeniyaan
aad diyaar u tahay Baro Medicine ee Ukraine?
ee tayada sare ee waxbarashada yurub, Hawsha aqbalka fudud iyo lacagaha waxbarashada ugu hooseeya ee Europe. Hooba leh sababta aad u leedahay in aad doorato Ukraine!
1)ardayga Dibadda xaq u leedahay in ay qaataan United States ee Baarista Licensing Medical iyo galaan wadashada Medical (Degenaanshaha) tababarka ee United States.
2)awoodsiinta IMED waxaa aqoonsan Guddiga Waxbarashada ee qalin Medical Dibadda (ECFMG) iyo Golaha Medical ee Kanada (MCC) xaq u yeelashada ee ka qalin si aad u hesho shahaado iyo shatiga.
3)Ukraine Jaamacadaha ayaa aqoonsaday by Ururka Caafimaadka Adduunka
4) ardayda International waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan Imtixaanka Licensing Caafimaadka United States & hesho shahaadada ECFMG. shahaado The ECFMG u baahan tahay oo dhan qalin inay maray Step USMLE 1 iyo Step 2 (labada qaybood), soo gudbin qoraalka kama dambays ah, iyo in la siiyo nuqul ka mid ah shahaadada graduate ee xaqiijinta. Marka shahaado ECFMG la siiyay qalin ah waxay xaq u leeyihiin waxbarashada wadashada Medical (Tababarka Degenaanshaha) ee dalka Mareykanka.
)Inta badan Ukraine Medical Jaamacadaha ayaa aqoonsaday by Council Medical Hindiya, Pakistan Medical Council iyo ilkaha, Golaha Yurub of Medicine iyo Golaha Caafimaadka Guud (Diiwaangelinta kooban) ee UK.
6)Inta badan Jaamacadaha caafimaadka Ukraine leeyihiin xiriirka la badan Hay'adaha Sayniska ee hore ee USSR iyo adduunka oo dhan, sida Medical Academy Poland The, Jaamacadda Cambridge The, University Virden The, Clinics of Medicine Deg in Germany, Belgium, Austria iyo Israa'iil. Xarunta Caafimaadka ee Cardiff (England), Medical Center ee la diray-Etien (France), New York Medical Center, Yukreeniyaan Society Medical ee Kanada iyo Austria.
7) ardayda caafimaadka Ukraine xaq u muuqday United States Imtixaanka Licensing Medical (USMLE) iyo si ka sii badan iwm ...
8) ardayda caafimaadka Ukraine ay xaq u leeyihiin Guddiga Qiimaynta Afafka Professional The (caloosha) United Kingdom (UK) ETC badan.
Inta badan Jaamacadaha caafimaadka Ukraine ,kulliyadaha bixisaa koorsooyinka soo socda si ay ardayda raba for shahaadada Bachelor ee, dugsiga sare ka dib dugsiga sare.
General Medicine (Doctor of Medicine Degree) – 6 sano Dabcan
Ilkaha (Doctor of Ilkaha Degree) – 5 Dabcan sano
Pediatrics (Doctor of Medicine Degree) – 6 Dabcan sano
farmashiyaha (Bachelor of Farmashiyaha Degree) – 5 Dabcan sano
Waa abaal marinta ah koorso lix sano “Doctor of Medicine” (MD) degree. Tani waxay u dhigantaa “Bachelor of Medicine & Bachelor of Qalliinka” (Nbrbsh) degree abaal by dalalka Commonwealth sida UK, Australia, India iwm. Admission in koorsada la bilaabay ka dib markii heshiis taaghayn u dhexeeya ardayga iyo jaamacad u saxiixay. Kharashka loogu talagalay ardayda caalamiga ah waa la caawimada ee USD oo sii joogta ah in ka badan muddada heshiiska.
dhexdhexaad ah ee edbinta waa English for dhan lix sano ee ardayda caalamiga ah. Dabcan waxaa la siiyaa ee Russian / Ukrainian musharaxiinta maxalliga ah. Musharaxiinta barashada dhexdhexaad Ingiriisi lixda sano waxaa la siiyaa fasalada afka ee labadii sano ee ugu horeysa, sidaa darteed waxa laga yaabaa inay u yaqaana afka maxaliga ah ee Wadahadalada ay la bukaanka iyo isticmaalka maalin walba.
Manhajka The baray University la ansixiyay Wasaaradda Waxbarashada iyo Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha ee Ukraine.
Ardayda waxaa sameeyay kooxo yar yar oo 6-10 waayo, fasalada. Maaddaama ay koox arday yar, fiiro gaar waxaa suuragal ah in arday kasta. Waayo, labada sano ee ugu horreysa ardayda waxaa wax lagu baraa fasalka. Sannaddii 2aad, ardayda ayaa sidoo kale baray maadooyinka caafimaad oo la siiyey tababar caafimaad ee Isbitaalada waayo-aragnimo wax ku ool ah.
Ardaygu wuxuu u baahan yahay in uu akhriyo buugaagta iyo samayn is-diyaarinta hor dhigata fasalka. Notes la siiyaa la mid ah. Ardayda ka amaahan kartaa buugaag ka maktabadda ama iibsato buugaagta iyaga u gaar ah. Ardayda u baahan tahay 100% imaanshaha fasalka. Haddii ay ka maqan yihiin, ay u leeyihiin in ay su'alaha fasalka ee todobaadkan, ka dib markii ogolaansho sabab macalinka koorsada.
Kulan kasta oo fasal waa qiimeeynayo. Waxaa jira baaritaan gudaha ah in la gudbo. Sanad kasta ee waxbarashada waa muhiim waana in la soo maray ka hor inta ardayga loo ogol yahay si ay u qalin. Waxa intaa dheer in baaritaan gudaha ee jaamacadda, Ardayga ayaa noqotay Test State (baaritaanka dibadda) ka hor ka qalin 3aad iyo sanadkii 6aad ee waxbarashada. Sannaddii of qalin, ardayga waxaa lagu tijaabiyaa on aqoonta ku ool ah oo ku saabsan anshaxa caafimaad ee sariirta bukaanka (imtixaanka la taaban karo) iyo aqoonta sayniska iyo akhriska (imtixaanka akhriska). Labada in la soo maray ka hor inta qalin.
Ka dib markii qalin-, ardayga ku tababaran kartaa ama qoraan badan 20 takhasuso la bixiyo jaamacadda sida wadnaha, daawo caafimaad, cudurka kansarka, raajada, caafimaadka dadweynaha, iwm. halkan codso in ay waxbarashada caafimaadka
Waa dabcan shan sano ah. Ardayda waxaa la baraa profile caafimaad iyo noolaha aasaasiga ah iyo nidaamo daaweynta ilkaha. On dhamaystirka daraasadda ka qalin waxaa lagu abaalmariyay “Diploma of Doctor ah ” ama heerka uu BDS. Ardayda waxaa la baraa nidaamo af iyo caafimaad sida stomatology daweynta iyo lafaha. Wasaaraddu waxay si fiican u qalabaysan in la eego dhismaha, qalabka, qalabka waxbaridda. isbitaalka A waxbaridda ee xarunta of magaalada waxaa ku raran yihiin bukaanka. Ardayda wax ka barato dhibaatooyinka maamulaha of ilkaha: suuska ilkaha, Periodontitis iyo cudurada of darbiyada duufka leh ee saabka afka. Hawsha maamulaha of kuliyadda waa kaamilka ah ee waxbarashada ilkaha sare. Kulliyaddu optimizes habka waxbarashada loogu talagalay kaakicin awoodda fahamka ardayda, horumarinta caado u ah waxbarashada & cilmi-baarista iyo daraysa hab hal abuur hawl xirfadeed. Kulliyaddu ardayda ka caawisaa si ay u helaan aqoon fiican oo duurka ku ilkaha. Waxaa koraa oo uu yeesho, dhuuqin oo dhan ugu fiican, ka-aragnimada shaqada ee jaamacadda. University ayaa sidoo kale waxay bixisaa koorso graduate post iyo tababar caafimaad ee Ilkaha. halkan Codso inaad wax ka barato ilkaha
Waa koorso lix sanno ah ugu darto ah “Doctor of Pediatrics” degree. Waxaa la bixiyaa luqadda Ruush iyo Yukreeniyaan kaliya. Dabcan waa la mid “General Medicine” laakiin caafimaad oo diirada saaran yahay ilmaha, qalliinka ilmaha iwm. Kuwa ku dhameysato koorsadan u bartaan shahaadada ee Carruurta ah. Ardaygu wuxuu helayaa waxbarasho noolaha iyo caafimaadka guud ee labada sano ee ugu horeeya. Waxbarashada Carruurta bilaabo ka saddexaadna wuxuu u soo year.Students lixaad xariif aqoonta anatomy carruurta, jirka, cudurada iyo nadaafadda, cudurada, daaweynta cilladaha ku diiso, hip iyo hip-wadajirka ah horumarinta iyo kuwa kale. koorsooyinka graduate Post oo tababar caafimaad oo waxaa la siiyaa. halkan Codso inaad wax ka barato Caruurta
Waa dabcan shan sanno ah ugu darto ah “Bachelor of Farmashiyaha” degree. Koorsada waxaa lagu bixiyaa luqada Ruush iyo Yukreeniyaan kaliya. Ardayda waxaa la baraa asaaska daawo iyo biology iyo qaar ka mid ah dhinacyada caafimaad aad u. On dhamaystirka shahaadada ee farmashiyaha la siiyo. Waxaa loo tababaray in ay ka shaqeeyaan shirkadaha iyo / ama cilmi. Nidaamsanaan A loo abuuray, tababarka khubarada aqoon sare le. The waaxaha Ra'iisul yihiin: Farmashiiste, biology, genetics, cilmi barasho dhir, in-organic chemistry, gorfaynta, chemistry jirka iyo organic. koorsooyinka graduate oo sayidkaagii Post ayaa sidoo kale ku bixiyeen in Farmashiyaha. halkan Codso inaad wax ka barato farmashiyaha
Waa saddex sano ah ama koorso afar sanno ah ugu darto ah “Bachelor of Nursing” degree. Ardayda ugu horeysay ka baran nidaamo caafimaad iyo noolaha asaasiga ah, maadooyinka markaas caafimaad iyo kalkaalinta xaalado kala duwan. tababar la taaban karo iyo akhriska waxaa la siiyaa fasalka iyo in isbitaalada.	halkan Codso inaad wax ka barato kalkaalinta
Koorsooyinka bixiyeen Ukraine Jaamacadaha Medical ama kulliyadaha raacaan Geeddi-socodka, iyadoo ujeedada loo sameeyey Area Waxbarashada Yurub sare ah by habka kaxaynayso by 46 dalalka ka qayb iyo Council ee Europe. The gool aasaasiga ah waa sida soo socota:
· Easy in ay ka soo rarayo wadan kale gudahood Area Waxbarashada Yurub Sare ee ujeedada waxbarasho dheeraad ah ama shaqo.
· Kordhi soo jiidashada tacliinta sare Yurub si ay dad badan oo ka yimi dalalka aan yurub u timid inaad wax ka barato iyo / ama shaqo ee Europe.
· Bixi Europe la ballaadhkeeduna yahay, tayo sare leh iyo saldhigga aqoonta sare, iyo in la xaqiijiyo horumarinta Europe sida deggan a, nabad iyo dulqaad bulshada.
articles ku saabsan Ukraine
Fadlan akhri articles ku saabsan Ukraine. Waxa ay noqon doontaa faa'iido kuu.
About Ukraine - macluumaad guud oo ku saabsan Ukraine. waxay noqon kartaa mid lagu caajiso, laakiin waxtar leh
Nolosha Ukraine - Kurtumm of ardayda ajinebiga ah. Halkan waxay dhihi waxay jecel yihiin in ugu Ukraine
Kharashka ku nool Ukraine - oo dhan oo ku saabsan qiimaha ee Ukraine. Hubi in Ukraine ay tahay dalka ugu jaban ee Europe.
jaamacadaha Caafimaadka ee Ukraine
Dhammaan jaamacadaha Yukreeniyaan waa weyn. Waxaan doortaan yar waxaan jeclaan ugu ah.
Jaamacadaha Medical ee Ukraine
Ukraine ayaa 317 jaamacadaha. Waxaad dooran kartaa wax kasta oo iyaga ka mid ah.
Fiiri dhammaan jaamacadaha
jaamacad caafimaad & ilkaha Poltava